एनालग "Kalgel": मूल्य, प्रयोगको लागि निर्देशन, विशेष गरी
हरेक आमाले बच्चा पहिलो दूध दाँत हुनेछ जब क्षण लागि प्रतीक्षा छ। एक धेरै महत्वपूर्ण भएको crumbs को विकास मा प्रक्रिया - र त्यहाँ बिल्कुल केही आश्चर्यजनक किनभने dentition छ। त्यो केवल यो एक धेरै सुखद बच्चालाई पीडित छ कारण जो गर्न, गिजा मा दुखाइ र खुजली को लक्षण सँगसँगै छैन गर्नुपर्छ। खुसीको कुरा, आधुनिक औषधि विज्ञान खडा छैन अझै पनि, र लामो बच्चा धेरै सजिलो राज्य हो जो विशेष gels, आविष्कार गरिएको छ। त्यहाँ आफ्नो साथीहरूको थुप्रै छन् हुनत यी लागूऔषधको एक "Kalgel," छ।
"Kalgel" जेल। लोकप्रिय उपकरण को Analogs
दुखाइ कम गर्ने - माथि उल्लेख रूपमा, "Kalgel" teething, अर्थात् प्रक्रिया सरल बनाउन डिजाइन गरिएको छ। तपाईं बच्चा को एक पाँच महिना उमेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो जेल सामयिक प्रयोग लागि हो। दबाइ को एक सानो रकम सफा औंला मा राख्न आवश्यक छ, त्यसपछि बच्चा को मसूडों मा rubbed सुरु गर्न फ्लिक। यस मामला मा, तपाईं यसलाई एक दिन6पटक सम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तयारी मा खुजली, urticaria, एलर्जी प्रतिक्रिया, कठिनाई निगलने, उल्टी को रूप मा प्रकट गर्दै छन् साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यो सामान्यतया एक अधिमात्रा फलस्वरूप हुन्छ। कुनै पनि प्रतिक्रिया को घटना मा तुरुन्तै जेल प्रयोग गर्न बन्द र symptomatic उपचार को नियुक्तिका लागि चिकित्सा सल्लाह खोज्नुपर्छ।
दबाइ को औसत मूल्य ट्यूब 286 rubles (10 ग्राम) भित्र स्थित छ।
teething को दुखाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ "Kalgel" analogues उपकरण पनि अवस्थित मात्र, र पर्याप्त मात्रा मा समाप्त गर्न। "Dentinox", "Kamistad", "Dentol-बेबी" र अरूलाई: सबैभन्दा ज्ञात र प्रभावकारी औषधी बीचमा निम्न छन्। तिनीहरूले कार्य को "Dentolom" प्रकार समान छन्, तर अझै पनि केही मतभेद छन्। लागि छोटकरीमा तयारी थप विवरण तिनीहरूलाई प्रत्येक अलग विचार गर्नुपर्छ।
"Dentinox" (जेल)। मूल्य, प्रयोगको लागि निर्देशन
पहिलो एनालग "Kalgel" हामी विचार जो - "Dentinox" छ। जेल "Dentinox" दुखाइ कम गर्न teething प्रक्रिया चलिरहेको बेला प्रयोग गरिन्छ। साथै, यो विरोधी भडकाऊ कार्य छ, र पनि रिसले गिजा र मुखको श्लेम लाग्एको झिल्ली को likelihood कम गर्छ।
यो जेल आफ्नो औंला संग मसूडों सीधै लागू गर्नुपर्छ। 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरु मा दबाइ को प्रयोग केवल बाल विशेषज्ञ संग परामर्श पछि अनुमति दिइएको छ।
जेल "Dentinox" प्रयोग कुनै थप 2-3 गुणा एक दिन हुन सक्छ सुत्न वा खानाको पछि जानुअघि। सिफारिस गरिएको खुराक अधिक को मामला मा श्वसन कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।
दबाइ को मूल्य 293 rubles भित्र छ।
"Kamistad" (जेल)। मूल्य, प्रयोगको लागि निर्देशन
एनालग "Kalgel" - "Kamistad" Orthodontic प्रक्रियाहरु समयमा प्रयोग teething समयमा, तर पनि गिजा वा मुख को श्लेम लाग्एको झिल्ली, mucosa दाह ब्रेसहरू वा कृत्रिम अंग को सुनिंनु मा मात्र गर्न सक्दैन भनेर अन्य यस्तै तयारी भिन्न हुन्छ।
"Kamistad"3महिना पुरानो बच्चा, कुनै अधिक3पटक एक दिन सुरु हुने, प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Contraindications र साइड इफेक्ट कार्य एक समान मोड संग अन्य लागूपदार्थको कि उत्पन्न ती फरक छैन। यो एलर्जी प्रतिक्रिया, खुजली, कठिनाई साँस, उल्टी हुन सक्छ।
यो एनालग "Kalgel" मुख्य दबाइ भन्दा सस्ता। यसको मूल्य 200 rubles ट्यूब (10 ग्राम) भित्र छ।
"Dentol-बच्चा": मूल्य, प्रयोगको लागि निर्देशन
हामी विचार जो "Kalgel" को निम्न एनालग - "। Dentol-बच्चा" यस दबाइ को प्रयोग दुवै बच्चाहरु र वयस्क हुन सक्छ। यो teething गर्दा, दुखाइ निर्मूल बच्चाहरु र वयस्क मा दाँत दुखाइ हटाउन डिजाइन गरिएको छ। "Dentol-बच्चा" क्षति वा मौखिक mucosa र गिजा, को सुनिंनु को मामला मा साथै यस्तो prosthetic र टी रूपमा दन्त प्रक्रियाहरु समयमा प्रयोग पनि जेल। डी
दबाइ को प्रयोग4महिना पुरानो बच्चा, कुनै 3-4 भन्दा बढी पटक एक दिन सुरु हुने, सम्भव छ।
प्रतिकूल दबाइ प्रभाव यसको घटक गैर-विषाक्त र गैर-allergenic हुन्, केवल अधिमात्रा को मामला मा सम्भव छ। जब राता, खुजली, सुनिंनु वा ईर्ष्या उत्पादन प्रयोग तुरुन्तै रोक्नु पर्दछ।
विभिन्न "Dentol-बच्चा" पर्याप्त उच्च मूल्य - प्रति ट्यूब 515 rubles।
"Kalgel"? Analogs? जो राम्रो छ? हामी बुझ्न
सबै दबाइहरु कार्य एक समान प्रकार देखि, यो सबै भन्दा राम्रो छ के, "Kalgel" वा यसको analogs न्याय गर्न गाह्रो छ। केवल माथि-वर्णन एनालग "Kalgel" जो पहिचान गर्न सकिन्छ, यो "Dentol-बच्चा" छ। यसको पूर्ण सुरक्षित म्यानिङ स्तर र स्पष्ट साइड इफेक्ट को कमी को लागि धन्यवाद, यो धेरै लोकप्रिय छ।
खातामा चयन समय मात्र होइन गुणस्तर तर पनि उत्पादन को मूल्य श्रेणी मा असम्भाव्य छ गर्नेहरूलाई "Kalgel" किन्न। तपाईं धेरै सस्ता चयन गर्न सक्नुहुन्छ किनभने Analogs।
कुनै पनि मामला मा, चयन समयमा पहिलो दबाइ गर्न बच्चा सम्भव प्रतिक्रिया पालना गर्नुपर्छ। यस आधारमा यो एक विशेष बच्चाको लागि राम्रो उपयुक्त छ कि निर्धारण गर्न सकिँदैन। तसर्थ, कुनै छ र कुनै पनि विशिष्ट सिफारिसहरू हुन सक्दैन।
प्रोटिन "Maksler" - एक कम मूल्य मा राम्रो परिणाम
प्राकृतिक तैयारी "ओवेवोल": प्रयोगको लागि निर्देशन
Antiparkinsonian दबाइ "ल्याक": प्रयोगको लागि निर्देश
Teething लागि Analgesic जेल। teething लागि सबै भन्दा राम्रो जेल
तैयारी 'फ्यर्क्स': प्रयोगको लागि निर्देशन
Glatiramer एसीसेट: पदार्थ को एक विवरण
Bedbugs कसरी? यो bedbugs को बाइट्स जस्तो देखिन्छ?
महिला नोट: तपाईंले ovulation को दिन कसरी थाहा
सस "Demiglas" - फ्रान्सेली पाक चमत्कार
यो फ्रीजर मा नुनीन माछा स्थिर गर्न सम्भव छ?
इनामेल - यो के हो? प्रकार र आधुनिक enamels को विशेषताहरु
Zhizel Paskal: अभिनेत्री, एक राजकुमारी बन्न
दायरा के हो? प्रजाति नाम मात्रा। तालिका तराजू
कसरी किंडरगार्टन मा बच्चा व्यवस्था गर्न - आधुनिक आमाबाबु को समस्या
"वाइकिंग" (हिंड्न-पछि): विनिर्देशों, वर्णन, मूल्य, समीक्षा
म्यूनिख डाय्चस संग्रहालय
कार्गो को एक भण्डारण रूपमा एक भन्सार गोदाम
75 वर्ष को लागि हजुरआमा दिनको विचार नातिनातिनी